Maitiro Ekutanga Podcast Yako Bhizinesi (Ine Zvidzidzo Zvadzidzwa Kubva Kwandiri!) | Martech Zone
Maitiro Ekutangisa A Podcast Yako Bhizinesi (Ine Zvidzidzo Zvakadzidziswa Kwandiri!)
Pandakatanga yangu podcast makore apfuura, ndaive nezvinangwa zvitatu zvakasiyana:
simba - nekubvunzurudza vatungamiriri muindastiri yangu, ndaida kuti zita rangu rizivikanwe. Ichokwadi chakashanda uye chakatungamira kumimwe mikana isingadaviriki - sekubatsira kubata-inomirira Dell's Luminaries podcast izvo zvakakonzera kumusoro 1% yevanonyanya kuteerera podcast panguva yayo yekumhanya.
tariro - Handinyari pamusoro peizvi… paive nemakambani andaida kushanda nawo nekuti ndakaona tsika dzakakodzera pakati pemazano angu neyavo. Yakashanda, ini ndakashanda nemamwe makambani anoshamisa, kusanganisira Dell, GoDaddy, SmartFOCUS, Salesforce, Angie's Chinyorwa… uye nezvimwe.
izwi - Sezvo podcast yangu payakakura, zvakandipa mukana wekugovana tarisiro nevamwe vatungamiriri muindastiri yangu vaive nehunyanzvi uye vari kuwedzera asi vasingazivikanwe. Ini handinyari kuti ini ndoda kuita iyo podcast iwedzere kusanganisa uye dzakasiyana kuvandudza kuoneka kwayo uye kusvika.
Izvo zvakati, hazvisi nyore! Zvidzidzo zvakadzidzwa:
Kuedza - iko kuedza kutsvagisa, kugadzira, kutsikisa, uye kukurudzira zvirimo zvinotora nguva yakareba kupfuura kuita bvunzurudzo. Saka iyo-yemaminetsi makumi maviri-podcast inogona kutora matatu kusvika mana maawa enguva yangu kuigadzira uye kuiburitsa. Iyo inguva yakaoma nguva yangu uye yaita kuti zvindiomere kuramba ndichikurumidza.
tichimhanya - Kungofanana neku blogga uye zvemagariro enhau zvinoshanda, ndozvinoitawo podcasting. Sezvo iwe uchitsikisa, iwe unowana vashoma vateveri. Izvo zvinotevera zvinokura uye zvinokura… saka kukurumidza kwakakosha pakubudirira kwako. Ndinoyeuka pandakanga ndine zana revateereri, ikozvino ndine makumi ezviuru.
Kuronga - Ini ndinotenda ndinogona kuwedzera kusvika kwangu dai ndaive nechinangwa mudhaidhi yepodcast yangu futi. Ndingafarire kugadzira yemukati khalendari kuitira kuti, mukati megore rose, nditaure pane yakatarwa musoro wenyaya. Fungidzira Ndira Gumiguru uri e-commerce mwedzi zvekuti nyanzvi dzaigadzirira mwaka unouya!
Nei Bhizinesi Rako Richifanira Kutanga Podcast?
Kunze kwemienzaniso yandakapa pamusoro, pane zvimwe zvinomanikidza Statistics pane podcast kugamuchirwa izvo zvinoita kuti ive svikiro yakakodzera kuongorora.
37% yevanhu vari muUS vakateerera podcast mumwedzi wapfuura.
63% yevanhu vakatenga chinhu munhu wepodcast inomukurudzira pane yavo show.
Pakazosvika 2022, zvinofungidzirwa kuti kuteerera podcast kuchakura kusvika pamamiriyoni gumi nematanhatu emamiriyoni muUnited States chete.
Businessing.cn, bhizinesi rezvemari, uye kukweretesa kutsvagisa uye ruzivo webhusaiti muUK, inoita basa rinoshamisa pakukufambisa iwe pane zvese zvaunoda kuti uwane podcast yako kumusoro. Iyo infographic, Bhuku Diki Diki Rekutangisa Kutanga A Podcast inofamba nhanho dzinotevera dzakakomba… ita shuwa kuti pinda nepositi yavo apo pavanowedzera toni yezviwanikwa!
Sarudza a musoro iwe chete unogona kununura… iva nechokwadi chekutsvaga iTunes, Spotify, SoundCloud, uye Google Play kuti uone kana uchikwanisa kukwikwidza.
Wana kurudyi Microphone. Tarisa uone yangu studio yekumba uye zvishandiso zvemidziyo pano.
Dzidza kuti ungazviita sei pepeta yako podcast uchishandisa editing software senge Audacity, Garageband (Mac chete), Adobe Audition (inouya neAdobe yekugadzira gore suite). Kune zvakare huwandu huri kukura hwepamhepo mapuratifomu uye maapplication!
Nyora podcast yako se Video saka unogona kuiisa kuYouTube. Iwe unogona kushamisika kuti vanhu vangani teerera kune Youtube!
tora nemitambo yakanyatsovakirwa mapodcast. Podcasts akakura, ekushambadzira mafaera uye yako chaiyo webhu server ichadzipwa pane bandwidth inodiwa.
Tine chinyorwa chakadzika pamusoro pekuenda kupi bata, syndicate, uye kusimudzira yako podcast iyo inotsanangura zvese zveakasiyana mauto, kubatanidza, uye kusimudzira chiteshi iwe chaunogona kutora mukana kubva.
Imwe yekuenda-kune zviwanikwa kwandiri (ine yakanaka podcast) iri Brassy Broadcasting Kambani. Jen akabatsira zviuru zvevanhu kutanga uye kuvaka yavo bhizinesi podcasting zano.
Ah, uye uve shuwa kunyorera kune Martech Zone Interviews, Podcast yangu!
Tags: kutanga sei podcastPodcast yekugadzirisapodcast vapepetipodcast maikorofonipodcast nhambaPodcast nziraPodcast matipipodcasting matipitanga podcast
Retail uye Consumer Kutenga Maitiro e2021